नव बिवाहित श्रीमतीले श्रीमानको श,व अंगालेर रूँदा ओभानो रहेनन् कसैका आँखा ! -
Home समाचार नव बिवाहित श्रीमतीले श्रीमानको श,व अंगालेर रूँदा ओभानो रहेनन् कसैका आँखा !
नव बिवाहित श्रीमतीले श्रीमानको श,व अंगालेर रूँदा ओभानो रहेनन् कसैका आँखा !
बाँकेको कोहलपुरमा भएको सडक दुर्घ-टनामा एक जनाको मृ’त्यु भएको छ । कोहलपुर नगरपालिका–३ किरणनाला नजिकै पूर्वपश्चिम राजमार्गमा बर्दियातर्फ जाँदै गरेको भे १ख २२३९ नं को बस र कोहलपुरतर्फ आउँदै गरको भे १ प ५६१ नं को मोटरसाइकल एकआपसमा ठो क्किदा मोटरसाइकल चालक कोहलपुर नगरपालिका– ३ निवासी २५ वर्षीय वीरेन्द्र शाहीको मृ’त्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजु भण्डारीले जानकारी दिए ।
शाहीको केही हप्ता अघि मात्र बिवाह भएको थियो । उनको मृ’त्युपछि कोहलपुर सोकमा डु बेको छ भने उनका साथीभाई आफन्तले उनको तस्विर फेसबुकमा राखी श्रद्धा’ञ्जली अर्पण गर्दै यो घ’टनाले निकै दुखि तुल्याएको बताएका छन् ।
उनको मृ’त्युपछि श्रीमती अस्पतालमै पुगेर शाहीलाइ अंगालो हालेर भक्कानो छोडेर रोएकी थिईन जुन दृश्य निकै हृदय-*बिधारक थियो । जुन दृश्य देख्दा नरुने र आखाबाट आँशु नझार्ने कोहि थिएनन ।